ကြာတော့လည်း ထူနေပြီ .. ဒါမျိုးတွေ ရိုးနေပြီ .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကြာတော့လည်း ထူနေပြီ .. ဒါမျိုးတွေ ရိုးနေပြီ ..
ကြာတော့လည်း ထူနေပြီ .. ဒါမျိုးတွေ ရိုးနေပြီ ..
Posted by thihayarzar on Sep 19, 2011 in News | 8 comments
ယနေ့ မြန်မာ နှင့် ထိုင် U – 19 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာ နှစ်ဂိုး တစ်ဂိုး ဖြင့် ရှုံးသွားပြန်ပါပြီ .. မြန်မာဘောလုံးပွဲဆိုရင် မကြည့်တော့ဘူးလို့ ပြောနေကြတဲ့ မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကတော့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာက် ဘောလုံးဝါသနာပိုးတွေက ဘောလုံးပွဲရှိရင် မနေနိုင် အိမ်မှာတောင် တီဗီကထိုင်မကြည့်ချင် ဘောလုံးကွင်းထဲသွားပြီး အော်ဟစ်အားပေးလိုကရမှာ အားရှိတာ တဲ့ …. ဘောလုံးကွင်းကိုမသွားခင်မိုးလေးကရွှာထားတော့ ရေအိုင်ရင် ပွဲပျက်မလားလို့တောင်ထင်နေတာ .. ကားပေါ်ရောက်တော့ မိုးကတော့ မြန်မာဘက်ကပါနေပြီတဲ့ မိုးရွှာရင်မြန်မာနိုင်ပြီတဲ့ … မရွှာလည်းနိုင်စေချင်ပါတယ် .. မိုးရွှာမှာစိုးလို့ အထူးတန်းလက်မှတ်သွားဝယ်တာ သုံးထောင်တဲ့ .. များတော့များတယ် များလည်းမတက်နိုင်ဘူး ဒီလိုတွေစီစဉ်ပေးတာကိုက တန်နေပြီ … တစ်ချိုကလည်းပိုက်ဆံမပါလို့ နှစ်ထောင်ထားပါတဲ့ .. ဈေးဆစ်နေသေးတယ် .. ဂိတ်ပေါက်ရောက်တော့ လုံခြုံရေးတွေက ၀ိုင်းပြီးတော့စစ်တယ် .. ဖုန်းပါဝါဖွင့်ပြခိုင်းတယ် .. အစောကြီးလာပြီး ဂျာနယ်လေးအေးဆေးထိုင်ဖတ်မလို့ ၀ယ်လာတာ သိမ်းသွားတယ် .. ရေစွက်ပြီး ထုမှာစိုးလို့ တဲ့ … ထီးကတစ်ဖက် ရေကလည်း အိက်နဲ့ တစ်ဖက် လက်ခုပ်တောင်ဘယ်လိုတီးရမလဲလို့စဉ်းစားနေတာ .. ကွင်းကြီးထဲမှာ အလုပ်သမား ဆယ့်ငါးယောက်လောက်ရှိမယ် ရေတွေခပ်ထုပ်နေကြတာ … ကန်လို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကို ကြိုးစားနေကြတာ …
ထိုင်းကကောင်ကြီးတွေက အရပ်တွေကအရှည်ကြီးတွေနဲ့ တောင့်ကောင်းကောင်းကြီးတွေ မြန်မာတွေကတော့ သေးသေးပုပုလေးတွေပေါ့ .. ထိုင်းကအရင်သွင်းသွားတယ် အရပ်ရှည်တာအခွင့်ကောင်းယူပြီ ခေါင်းတိုက်သွင်းသွားတယ် … မြန်မာတွေကလည်း လူတွေကသေးပေမယ့် ကောင်းပါတယ် နည်းပြလည်းလူစားလည်းမှန်ပါတယ် နံပါတ်ကို ၀င်လာလာချင်း ချေပဂိုးပြန်သွင်းသွားတယ် … ပွဲကပိုပြီးကြည့်ကောင်းသွားတယ် … ပရိသတ်တွေအားပေးတာ အရင်ကထက်စာရင် ပိုပြီးတော့ ယဉ်ကျေးလာတယ် … ပထမပိုင်းမှာ တစ်ဂိုးစီသရေကျနေတယ် … အပေါ့သွားတဲ့လူတွေကလည်း အများကြီးပဲ အိမ်သာကိုမသွားကြပဲ တွေ့တဲ့နေရာမှာ အပေါ့သွားနေကြတယ် မုန့်တွေရောင်းတဲ့ဘေးမှာ ဖြစ်သလိုသွားနေကြတယ် အနီးနားမှာ ကောင်မလေးတွေလည်းရှိကြတယ် …တစ်ချိုကကပြောသွားသေးတယ် ငါတို့မြန်မာဘောလုံးကွင်းက အပေါ့သွားတဲ့နေရာက အကျယ်ကြီးပဲတဲ့ … အိမ်သာကလည်း ညစ်ပတ်ပါတယ် .. အခန်းလည်း မခွဲထားဘူး ….အတူတူအပေါ့သွားကြတယ် …လုံခြုံရေးတွေတောင် ဖြစ်သလိုပဲအပေါ့သွားကြတယ် .. ဓာက်ပုံရိုတ်တင်ရင်မကောင်းလို့မတင်တော့ဘူး …… ထိုင်းအသင်းကဒုတိယဂိုးကို ပယ်နယ်တီကနေသွင်းပြီး ဦးဆောင်သွားတယ် .. ဒီဂိုးက ဒိုင်ညစ်တာလည်းပါတယ် မြန်မာတွေဖျင်းတာလည်းပါတယ် .. မပေးလည်းရတာကိုပေးလိုက်တယ် … မြန်မာတွေကလည်းပြာပြီးကန်တယ် ဘောလုံးကောလူကောကန်တယ် ..ဒိုင်က ၆၀မှားတယ် မြန်မာက ၄၀ မှားတယ် …. ပွဲကကြည့်ကောင်းနေတုန်းပဲ သရေလောက်တော့ ကျပါစေလို့ဆုတောင်းနေတာ ပွဲပြီးခါနီး ပင်နယ်တီ မြန်မာကရတယ် ဒီတစ်ခါဒိုင်မှန်တယ် မြန်မာတော်တယ် မကန်ပဲဆွဲပြေးတာ ဖျတ်ထုက်တာ ဘောလုံးမထိဘူး … ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ပင်နယ်တီကတိုင်ထိပြီး အပြင်ပြန်ထွက်လာတယ် … သေလိုက်ပါတော့ဗျာ … တော်တော်ခံရခတ်တယ်ဗျာ … နောက်ထပ်ကြိုးစားပေမယ့် ရှုံးသွားပြန်ပြီဗျာ … ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ လက်ခုပ်တီးပြီး မြန်မာဆိုတာကိုပြကြတယ် … တစ်ချို့ကလည်း အားမလိုအားမရတွေဖြစ်ကြတာပေါ့ .. မြန်မာဘောလုံးအသင်းနိုင်မယ့်နေ့တွေကိုဆက်လက်မျှော်လင့်နေရင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
“မြန်မာနိုင်ပြီ …. ဒို့မြန်မာနိုင်ပြီ ´´ ဆိုတဲ့သီချင်းကို ဘယ်တော့များမှပြန်ကြားရမှာလဲ ။ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကိုတော့ထားပါ ။ အာရှကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သေးပါလား ။ ထိုင်းနဲ့မြန်မာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ “ တော်ပါကွာ ထိုင်းကငယ်နိုင်တွေ ဘယ်တော့မှ မြန်မာကနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ´´ ဆိုတဲ့စကားပဲကြားနေရတယ် ။ တစ်ကယ်လဲဟုတ်ပါတယ် ။ ငယ်နိုင်ဆိုတဲ့ နာမည်ဆိုးကြီးကို ပယ်ဖျက်နိုင်အောင် မကြိုးစားကြတော့ဘူးလား ။ ဒီလိုပဲ မြန်မာ့ဘောလုံးလောက သွားနေတော့မှာလား ။ တွေးရင်းနဲ့ ရင်မောမိပါတယ် ။
ညနေက မြန်မာ့အသံ မှာလား မသိဘူး
ဒီပွဲ ကို ခဏကြည့်မိတယ် ဗျာ
အဲဒီ ထိုင်း၂-၁မြန်မာ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်
့ပွဲပြီးကာနီး ၁၀ မိနစ်လောက် အလို ပေါ့
ကိုသီဟရာဇာ တင်သလို ပဲ
ပင်နယ်တီ လဲ ရရော
ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော် တို့ တစ်တွေ ပျော်ကြတာပေါ့
ချာတိတ် ပင်နတီ ကန်မယ် လဲ လုပ်ရော
ကွင်းထဲက ပရိသတ်တွေ က
နိုင်ငံတော် သီချင်း ကို အကျယ်ကြီး အော်ဆိုနေတာကို
ကြားရတယ် ၊ မြန်မာ့အသံ က ရိုက်ပြ တယ် ။
တစ်ကယ့် တစ်ကယ် အရေးကြီးချိန်
ကန်မယ့် ချာတိတ်လဲ စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းနေချိန်မှာ
တိတ်တိတ်ပဲ နေပေးသင့်တယ် လို့ ထင်မိတာပဲ
ဂိုးဝင်မှ (သို့ မဟုတ်) လွဲမှ သာ ဆက်အားပေးပေါ့
ကျွန်တော့် အမြင် ကို ပြောပြတာပါနော် ။
ဟယ် ဘောလုံးကွင်းထဲအပေါ့သွားတာ မိန်းကလေးတွေနားမှာ။ကြောက်စရာပါလား မဆင်မခြင်ကြတော့ဘူး။ပြီး ဘာတဲ့
အိပ်သာမှာလဲ တူတူသွားရတယ်။နောက်အားရင် သွားမကြည့်ရဲတော့ဘူး။
မြန်မာတွေ..ဂျင်နရေး၇ှင်း..တခုပြီးတခု…. လူကောင်လေးတွေသေး.. အရပ်တွေပု..။ ပိုက်လေးတွေစူ..။ အဟာရတွေချို့တဲ့.. ပါဝါတွေဆုတ်ယူတ်လာတာကိုး..။
မျိုးနွယ်လိုက်ကို.. စံနစ်တကျပြင်ယူရမဲ့ ကိစ္စလို့ထင်မိတယ်.။
မူကြို..ကလေးတွေအရွယ်ကစပြိး.. ကျောင်းတွေမှာ.. အဟာရပြည့်တဲ့အစားအစာတွေကို.. အစိုးရကြီးကြပ်မှုနဲ့.. ကျွေးသင့်တယ်..။
ဆီပြန်တွေအစားများတာ..။ ဂျုံ၊ပဲ အစားနည်းတာ.. ၊ နွားနို့၊ကြက်ဥ.. အသားအစားနည်းတာ..စသဖြင့်.. အဟာရဗေဒနားလည်သူတွေက.. လုပ်ထုံးတွေထုတ်.. စံနစ်တကျပြင်ယူသွားရမဲ့ အမျိုးသားရေးကိစ္စလို့ ထင်မိတယ်..။
အမျိုးသားကျမ်းမာရေးနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့.. အာမခံစံနစ်တွေ၊ လူမှုဖူလုံရေးတွေ..ခေတ်နဲ့ညီအောင်.. ပြုပြင်ပြန်ဆွဲသင့်တယ်..။
ဒီလိုလုပ်မှ… နောင်.. အနှစ် ၂၀…။ အနှစ် ၂၀…
ဘောလုံးတင်မက.. ရေကူး၊အပြေး၊ဘောက်ဆင်၊တင်းနစ်..စတဲ့အားကစားတွေတင်မက.. အရာရာမှာ.. အားလုံးကို.. ကျော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်..။
ဒီကိစ္စမျိုးက.. အမျိုးသားေ၇းဖြစ်တယ်…. လက်ပူတိုက်နေလို့ရတဲ့ ကိစ္စတွေမဟုတ်..။
သုဝဏ္ဏ ကွင်းကတော့ မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ၊ လူကြားထဲ အပေါ့သွားတာကိုတော့ အရင်ကတည်းက မြင်ဖူးပါတယ်… တစ်ချို့ဆို ရေသန့်ဘူးထဲ ရှူးပေါက်ထည့်ပြီး… မကောင်းသူထိပ် ကောင်းသူထိပ် လုပ်ကြတာလေ.. အဲသည့်ကတည်းက မရောက်ဖြစ်တာ ခုချိန်ထိပဲ
Kai ပြောတာ မှန်တည်း အရင်တုန်းကမှ ကလေးတွေ. ငါးကြီးဆီတို. ဘာတို. ကျမ်းမာရေးငှာနက ဝေမျှသေးတယ် အခုတော.ဘာမှ မရ ။ အခု ယူ 19 နှစ်ပွဲပဲ ကြည်.လေ ထိုင်း ဗီယမ်နမ် စင်ကာပူ အသင်းက လူတွေ.နဲ. မြန်မာအသင်းကလူတွေ. အစား အဟာရ အတွက် လိုအပ်နေတာ ကွက်၂ကွင်း၂ မြင်နေရတည်း အဒီအတွက် ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးငှာနာသာမက အမျိုးသားရေး အဆင်. ဆွေးနွေးသင်.တယ်လို.ထင်.တယ်ဗျာ… အမှားပါရင်ခွင်.လွတ်ပါ။
နောက်ဆုံမိနစ်ဆိုတော့ ကလေးကစိတ်လှုပ်ရှားနေမှာပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ပရိသတ်ကလည်းပျော်တော့ အော်မိတာပေါ့ ….တကယ်ဆိုအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေရမှာ ….. ကံလည်းဆိုးလို့ပါ … နောက်တစ်ခုပြောဦးမယ် လုံခြုံရေးအ၀ဂိတ်မှာ ရဲသားတွေပဲ စစ်ဆေးကြတယ် … မိန်းကလေးတွေကိုတော့ ရဲမေတွေ စစ်ဆေးသင့်တယ် ……… ပြုပြင်စရာတွေတော့အများကြီးပါပဲဗျာ နည်းနည်းခြင်းတော့ အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တယ် … အရင်ဆုံး ရွာသားတွေအရင်ပြင်ရအောင် ………